'आमालाई दिसा कोच्चाएर मार्नेलाई टुडिखेलमा ल्याएर फाँसी दिनुपर्छ' - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
‘आमालाई दिसा कोच्चाएर मार्नेलाई टुडिखेलमा ल्याएर फाँसी दिनुपर्छ’
बिहानै अफिसमा पत्रपत्रिका हेर्दै थिएँ मेरो आखाँ नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा भएको मेरी ममीलाई मंगलबार स्कुलको पोलमा बाँधेर कुट्दै दिसा खुवाए, शुक्रबार ममी बित्नुभयो, प्रत्यक्षदर्शी १० वर्षीय बालक सुमन नेपालीको बयानमा पुग्यो । चाख राखेर पढ्दै गए जतिजति पढ्यो उतिउति मनमा पीडाहरु ओर्लिएर आए । आखाँहरु पुरै रसाए ।मन थाम्नै सकिन । रेस्टरुममा गएर आँसुु पुछेर आएँ । त्यो समाचार पढ्दै जादाँ मलाई मेरै छातिमा लात्तिले कुल्चिएझै भयो ।
हो जहाँसम्म काभ्रेकी लक्ष्मी नेपालीलाई ‘बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरिएको’ समाचार छ सायद लाग्छ नरसाउने आँखाहरु बिरलै होलान । लक्ष्मीलाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै स्कुलको पोलमा बाँधेर मलमूत्र खुवाइएको र अनि लात्तिले हान्यो भन्ने कुरा सुन्दा त्यो जन्तुलाई फाँसि पनि पिल्छाइ पिल्छाइ दिनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्माइ हो ।
एक आमाको शरीरमा लात्ति हिर्काउने छि कस्तो नालायक पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको नरपशु हो त्यो । जानेबुझेको भनौदा यस्ता अन्धा शिक्षकको नाममा कलंकले दिएको शिक्षा के पाए होला खै बालबालिकाले ? यस्ता पापी जन्मदै मर्नु पर्ने थियो किन बाँचेर बोझ भएको होला मनमा लागेको कुरा यहाँ राख्न उचित नै ठाने । मेरो विचारमा यस्तो कायर कुकार्य दानवले मात्र गर्नसक्छ ताकि मानवले हैन ।त्यस्ता समाजको बोझलाई चाहेर पनि भुल्न नसक्ने गरि आजीवन सजायको भोगी बनाउनुपर्छ।
यस्ता पनि सामाजिक पढाउने शिक्षक हुन्छन् ? आखिर यस्तो अन्धविश्वास कहिले सम्म ? हरे एक निदोर्ष महिलाको हत्या गर्ने ? सरकारले किन सजाय दिनसकेको छैन । नाबालकको बयान बमोजिम घटना सत्य हो भने दोषिहरु लाई फाँसी नै मात्र उचित दण्डहुनेछ। यस्ता समाजका नरपिचासहरु लाई हदैसम्मको कार्बाही गरिनु आबश्यक छ । कारण आउने दिनहरुमा फेरि यस्ता अमानवीय घटनाहरु सुन्न र देख्खन नपरोस । न्याय दिनको लागि बनेको कानुनले किन यस्ता घटनाको चिरफार गर्दैन ? यसको सुनुवाई हुन्छ कि हुंदैन?
यो मृतकका परिवारले न्याय पाउछ कि पाऊदैन अब पैश्न खडा भएको छ । मास्टर हिरा लामा र उनकी आमा काईली माया तामाङ लाई सजाय हुनैपर्छ । मानिस भएर मानिसलाई चिन्न सक्नु पर्छ यसैमा सबैको भलो हुन्छ । ज्यान मारेको मुद्दामा कडा भन्दा कडा कारबाही हुनु पर्छ अपराधी लाई ।मेरो बिचारमा त उनीहरुलाई टुडिखेलमा ल्याएर फाँसी दिनुुपर्छ ।